किन मान्छेले अरुको रिस, डाहा गर्छन् ? - Darpanpost
» खोज/विशेष अंक: 14035
किन मान्छेले अरुको रिस, डाहा गर्छन् ?
आमिर खान स्टारर हिन्दी चलचित्र ‘थ्रि इडियट्स’को एउटा दृश्यमा फरहान भन्छन्, ‘जतिबेला परीक्षाको नतिजा बोर्डमा साथी ( रैन्चो ) को नाम फेला परेन, उनी फेल भए कि भन्ने लागेर हामीलाई दुःख लाग्यो । तर, उनको नाम प्रथम श्रेणीमा रहेछ । यो कुरा थाहा पाउँदा हामी थप पीडावोध भयो ।’
इष्र्या वा डाहाले मान्छेलाई दुई किसिमको नतिजा दिन्छ । एक सकारात्मक, अर्को नकारात्मक । इष्र्या आफैमा प्रगति एवं उन्नतीको माध्याम बन्न सक्छ । अरुको सफलता, अरुको उन्तती देखेर आफुले पनि त्यस्तै गर्ने चाह जाग्छ । यसले मान्छेलाई निस्त्रिmय रहन दिदैन । उनीहरु पनि केही गर्न खोज्छन्, अरुकै देखासेखीमा भएपनि । यस किसिमको इष्र्या(भावले मान्छेलाई अगाडि बढ्न उक्साउँछ ।
इष्र्या, जो एक जन्मजान मानविय प्रवृत्ति हो । तर, यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुराले ठुलो फरक पर्छ । त्यही इष्र्या(भाव, जसले हामीलाई अरुको जस्तै उन्नती गर्न उक्साउँछ । त्यही इष्र्या(भाव, जसले हामीलाई भित्रभित्रै जलाउँछ ।
दोस्रो किसिमको इष्र्या(भाव भयानक हुन्छ । र, अक्सर मान्छेले आफुभित्र यस्तै विकार पालेका हुन्छन् । यसलाई हामी इष्र्या भन्दा पनि डाहा भनेर बुझ्छौं । डाहा गर्नु भनेको अरुको उन्नती, सफलतामा रिस गर्नु हो ।
यदि मनभित्रका यी विकारलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्ने हो भने, त्यसले हामीलाई नकारात्मक होइन, सकारात्मक नतिजा दिन्छ । जसरी कुनै फोहोर(मैलालाई मलखाँदमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ, नविकरणिय उर्जामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
भाषा आयोगद्धारा सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण सहित सरकार लाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस
कोरोना कहर , पढाई घर खर्च टार्न ढुंगा बजाउदैछन विद्यार्थी ।
अदभूत कलाका धनी तानसेन ११ बन्दिपोखराका गहतराज